Onyankopɔn tua wɔn a wɔne no di asi no ka (1-7)
Onyankopɔn mpɛ sɛ wɔsom obiara ka ne ho (2)
Yehowa ani ku wɔn a wɔde no yɛ guankɔbea no ho (7)
Wɔbɛsɛe Niniwe pasaa (8-14)
Ahohia no rensan mma bio (9)
Yuda bɛte asɛmpa (15)
1 Niniwe ho atemmusɛm:+ Nahum* a ofi Elkos no anisoadehu nhoma: 2 Yehowa yɛ Onyankopɔn a ɔmpɛ sɛ wɔsom obiara ka ne ho,+ na otua bɔne so ka;Yehowa tua bɔne so ka, na ɔntwentwɛn ne nan ase sɛ ɔbɛda n’abufuw adi.+ Yehowa tua wɔn a wɔne no di asi no ka,Na ɔboaboa abufuw ano twɛn n’atamfo. 3 Yehowa bo mfuw ntɛm+ na ne tumi sõ,+Nanso sɛ obi fata asotwe a, Yehowa remma ɔmfa ne ho nni da.+ Ɔreba a, mframa a ɛsɛe ade ne ahum na edi n’akyi,Na omununkum yɛ ne nan ase mfuturu.+ 4 Ɔka ɛpo anim+ ma ɛyow;Ɔma nsubɔnten nyinaa yoyow.+ Basan ne Karmel afifide twintwam+Na Lebanon nhwiren nso twintwam. 5 Ne nti mmepɔw wosow,Na nkoko nan.+ Asaase hu n’anim a, ɛbɔ birim;Ɛne wiase ne wɔn a wɔwɔ mu nyinaa.+ 6 Hena na obetumi agyina n’abufuw ano?+ Na hena na obetumi agyina n’abufuhyew ano?+ N’abufuw bɛdɛw sɛ ogya,Na ne nti abotan bedwiriw agu. 7 Yehowa ye,+ na ɔyɛ abannennen wɔ ahohia bere mu.+ Wɔn a wɔde no yɛ wɔn guankɔbea no, n’ani ku wɔn ho.*+ 8 Ɔbɛma nsu ayiri ahohoro n’asaase* koraa,Na wama esum atiw n’atamfo. 9 Pɔw bɛn na mubetumi abɔ atia Yehowa? Ɔde ɔsɛe pasaa reba. Ahohia no rensan mma bio.+ 10 Wɔanwene wɔn sɛ nsɔeNa wɔayɛ sɛ nea nsã* abobow wɔn,Nanso wɔbɛhyew te sɛ sare a awo. 11 Nea ɔbɔ Yehowa ho pɔw bɔneNe nea ɔma afotu bɔne nyinaa befi wo mu aba. 12 Nea Yehowa aka ni: “Ná wɔn ho yɛ den na wɔdɔɔso,Nanso wobetwitwa wɔn agu ma wɔn ase ahyew.* Mama mo ho ahiahia mo,* nanso meremma mo ho nhiahia mo bio. 13 Afei de kɔndua a ɛda wo so no, mebubu mu,+Na nhama a wɔde akyekyere wo no, mɛtew mu abien. 14 Nea Yehowa aka sɛ ɛbɛba wo* so ni,‘W’ase bɛhyew ama wo din ayera. Ahoni a woasen ne nea wode nnade ayɛ* a ɛwɔ w’anyame fi* no, mɛsɛe ne nyinaa. Mɛyɛ ɔdamoa ama wo, efisɛ mfaso biara nni wo so.’ 15 Hwɛ, nea ɔde asɛmpa nam no fi mmepɔw so reba;Nea ɔka asomdwoe asɛm no.+ O Yuda, di w’afahyɛ.+ Ɛbɔ a woahyɛ no, di so,Efisɛ ohuhuni biara rentwam wɔ w’asaase so bio. Wɔbɛsɛe no pasaa.”
^ Ɛkyerɛ, “Ɔwerɛkyekyefo.”
^ Anaa “ɔhwɛ wɔn so.” Nt., “onim wɔn.”
^ Kyerɛ sɛ, Niniwe asaase.
^ Anaa “nsã a wɔde hwiit ayɛ.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “na obetwam akɔ.”
^ Kyerɛ sɛ, Mama Yuda ho ahiahia no.
^ Kyerɛ sɛ, Asiria.
^ Anaa “ne ahoni a wɔagu.”
^ Anaa “w’abosomfi.”